शान्ति-सुरक्षाको ठेक्का मेरो होइन, जागिर खाएको हुँ : डिआइजी
Monday, 22 November 2010 18:19	नागरिक
अमर खड्का, इटहरी, मङ्सिर ६- पूर्वी तराईका जिल्लामा हत्या-हिंसाका घटना श्रृख्लाबद्धरुपमा बढिरहेका बेला पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका डिआइजी भिष्म प्रसाईले सम्पूर्ण शान्ति-सुरक्षा कायम राख्‍न ठेक्का लिन नसक्ने बताएका छन्। उनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रहरीको गस्ती बढाउन व्यापारीलाई पेट्रोल दिन पनि आग्रह गरे।
'सम्पूर्ण शान्ति–सुरक्षा कायम राख्‍ने मेरोमात्र ठेक्का होइन, मैले त जागिर खाएको हुँ,' उनले सोमबार इटहरीमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भने- सम्पूर्ण स्थानीयबासीको सहयोग भएमा मात्र शान्ति–सुरक्षा कायम हुन्छ।' उनले शान्ति–सुरक्षा कायम राख्‍न उद्योगी–व्यापारीसँग पेट्रोल माग गरे। 'पैसा दिँदा अनर्थ लाग्छ, सरकारले दिएकाले पुग्दैन,' उनले भने- पेट्रोलमा चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्।'
उनले यसो भनिरहेका बेला यस क्षेत्रमा आपराधिक घटना भने तीब्ररुपमा बढिरहेका छन्। सुनसरी धरानमा तीन दिनअघि नौ वर्षीय राज आचार्यको हत्या भएको थियो। हत्यामा संलग्न राजका छिमेकी १६ वर्षीय रञ्जित भनिने प्रतिकिशोर झालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत सुनसरीले आदेश दिएको छ। साताअघि विराटनगरमा एक औषधी व्यवसायीको हत्या र इटहरीमा दिनदाहडै एक युवामाथि गोली प्रहार गरिएको थियो। विभिन्न समूहले व्यापारीसँग मोटो रकम चन्दा माग गर्ने र नदिएमा भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिने क्रम रोकिएको छैन्।
यसरी पछिल्लो समयमा अपहरण, हत्या र गोली प्रहारसँगै गुण्डागर्दी, बेश्यावृति र हातहतियार बोकेर हिँडनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको डिआइजी प्रसाईले स्वीकार गरे पनि विगत वर्षका तुलनामा भने कमी आएकाले प्रहरी सफल भएको जिकिर गरे। उनले शान्ति-सुरक्षाको अवस्था दर्विलो पार्न अब संवेदनशील ठाउँलाई सुरक्षित बनाउन स्थानीय बासिन्दासहितको टोली बनाएर नयाँ अवधारणाअनुसार अघि बढ्ने बताए। पूर्वका अन्य स्थानभन्दा इटहरीमा बेश्यावृति, गुण्डागर्दी र हातहतियार बोकेर हिँड्नेलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीयबासीसहितको टोली पनि गठन गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार सबै स्थानमा टास्कफोर्स पनि गठन गरिने प्रसाईले बताए।
यो कस्तो अभिव्यक्ति हो ? राज्यले तपाइँलाई किन जागिर खुवाएको छ डिगज्यू ? तपाइँले मोजमस्ती गर्न कि शान्ति सुरक्षा गर्न ? आफ्नो कर्तब्य पूरा गर्न नसक्ने भए जनताले तिरेको करबाट तलब खाने अधिकार तपाइँलाई छैन । राजीनामा दिए बेस हुन्छ ।
तपाइँको जागिर नभए कसको जागिर त शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने? कि ठूलो पदमा पुगेर पदको मर्यादा बिर्सनुभएको हो।
2010-12-10 - गस्तीबाटै सैनिक जवान हतियारसहित बेपत्ता, खोजी तीब्र
2010-12-10 - अपहरणमा प्रहरी नै संलग्न भएको खुलासा